बोल मायाँ र गलबन्दी दुवै गीत हिट भएपछि पहिलोपटक गायिका शान्ती श्री मिडियामा ! (भिडियो)
बोलमाया-गायक तथा मोडल प्रकाश सपुतको वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको समस्यासम्बन्धी गीत ‘बोल माया’ अहिले निकै चर्चित बन्यो । प्रकाश सपुतले थुप्रै लोक तथा दोहोरी गीतमा आवाज भरेका छन् भने थुप्रै चर्चित गीतमा मोडलिङ पनि गरेका छन् ।
‘बोल माया’ प्रकाश सपुतकै शब्द र संगीतमा तयार भएको गीत हो । गीतमा गायक तथा संगीतकार नारायण रायमाझी, शान्ति श्री परियार र प्रकाश सपुतले आवाज भरेका छन् । यस गीतको संगीत संयोजन कमल साैँरागले गरेका हुन् ।
समग्रमा गीतमा परिवारको खुशीको लागि विदेश गएका र विभिन्न कारणले विदेशमै ज्यान गुमाएकाको परिवार, आफन्त र समाजमा पर्ने पीरमर्का, व्यथालाई गीतमा उतार्ने प्रयास गरिएको छ । गीत र भिडियोलाई दर्शक तथा श्रोताले अत्याधिक रुचाएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म यस गीतले युट्यूबमा ७ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ । गीत हेर्ने, सुन्ने दर्शक तथा श्रोताले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली लोकदोहोरीका पारखीलाई प्रकाश सपुत र शान्ति श्री ले फेरि अर्को नयाँ स्वाद चखाएका छन् । लोक कथालाई बुनेर उनले ‘गलबन्दी’ सार्वजनिक गरेका छन् । गलबन्दीलाई प्रकाशले ‘बोलमाया’को प्रिक्वेल भएको बताएका छन् । उनले यो गलबन्दी रोधीमा आधारित रहेर निर्माण गरेको बताएका छन् ।
गीतमा उनले प्रयोग गरेका लोक बाजा, शब्द र लयलाई दर्शकले वाहीवाही गरेका छन् । गीत शब्द, लय र संगीत, निर्देशन प्रकाश आफ्नै छ भने गायनमा गायिका शान्ति श्री परियारले उनलाई साथ दिएकी छिन् ।
यो भिडियोमा मोडल अञ्जली अधिकारीले यसमा अभिनय गरेकी छिन् । बोल मायामा गर्भवति भएकी अञ्जलीले गलबन्दीमा बच्चा जन्माएर स्कुले बनाईसकेकी छिन् भने अन्त्यमा छोरालाई गाउँलेले लखेट्छन् । किन लखेट्छन् त गाउँलेले ? प्रकाशले त्यो कथा ‘बोलमाया – २’ मा देखाउने बताएका छन् ।
* बोलमाया-गायक तथा मोडल प्रकाश सपुतको वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको समस्यासम्बन्धी गीत ‘बोल माया’ अहिले निकै चर्चित बन्यो । प्रकाश सपुतले थुप्रै लोक तथा दोहोरी गीतमा आवाज भरेका छन् भने थुप्रै चर्चित गीतमा मोडलिङ पनि गरेका छन् ।